Sulzer kordhiyay taxane XJ dewatering biyaha
Sulzer ayaa ku daray XJ900 si ay taxane XJ of dewatering biyaha bambooyin loogu talagalay macdanta, tunneling ama dhismaha.
Sulzer soo bandhigay taxane XJ of dewatering biyaha ku shubmo ee 2012 iyo XJ900 waa dheeraad ah kala duwan oo qaab ka mid ah taxanahan. Shirkadda ayaa sheegay in ay tahay doorasho dhaqaale oo lagu kalsoonaan karo, waayo, dewatering codsiyada.
bamka cusub ku qalabeysan yahay a motor koronto-oolnimada sare qiimeeyo 90 kw 50 suuqyada Hz iyo 108 kw (145 hp) 60 suuqyada Hz. The-oolnimada sare IE3 motor iyo hydraulics cusub weheliso saa'idka low-khilaaf yareeyo khasaaraha awood. Sidaas darteed, tirada guud ee kharashka tamarta yar yihiin, iyo raadkooda kaarboonka waa la dhimay.
design The Haydarooliga u oggolaanaysa in diinta fudud u dhexeeya-madaxa sare iyo-socodka sare gaadmada ah oo uu macnihiisu yahay in saarayaasha oolin karo bambooyin yar oo weli qaab sax ah Haydarooliga codsiga gaarka ah.
waqti Post: Feb-19-2020